Inqubomgomo Yobumfihlo - Element Society
Inqubomgomo Yobumfihlo Yewebhu
uzibophezele ekulondolozeni ubumfihlo bakho. Thintana nathi uma unemibuzo noma izinkinga mayelana nokusetshenziswa kweDatha yakho Yomuntu futhi sizokujabulela ukukusiza.
Ngokusebenzisa le sayithi noma / kanye nezinsizakalo zethu, uyavuma Ukucubungula Imininingwane Yakho Yomuntu njengoba kuchaziwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Izincazelo ezisetshenziswe kule Nqubomgomo
Izimiso zokuvikelwa kwedatha esilandelayo
Ngamaphi amalungelo onayo mayelana neDatha yakho yomuntu siqu
Yimiphi imininingwane yomuntu esiyiqoqa ngawe
Sisebenzisa kanjani imininingwane yakho yomuntu siqu
Ubani omunye okwazi ukufinyelela kuDatha yakho yomuntu siqu
Ulwazi mayelana namakhukhi
Idatha yomuntu siqu - noma yiluphi ulwazi oluphathelene nomuntu wemvelo owaziwayo noma owaziwayo.
Icubungula - noma yikuphi ukusebenza noma isethi yokusebenza eyenziwa kwiDatha yomuntu siqu noma kumaqoqo eDatha Idatha.
Isihloko sedatha - umuntu ongokwemvelo ogama lakhe lomuntu lwenziwa.
Ingane - umuntu wemvelo engaphansi kweminyaka engu-16.
Thina / nathi (noma i-capitalized noma cha) -
Izimiso zokuvikelwa kwedatha
Sithembisa ukulandela izimiso ezilandelayo zokuvikela idatha:
Ukucubungula kuvumelekile, kulungile, kungabonakali. Imisebenzi yethu yokucubungula inezizathu ezisemthethweni. Sibheka njalo amalungelo akho ngaphambi kokucubungula imininingwane yomuntu siqu. Sizokunikeza ulwazi mayelana nokuCubungula ngesicelo.
Ukucubungula kunqunyelwe ngenhloso. Imisebenzi yethu yokucubungula ifanelana nenhloso yokuthi Idatha yomuntu siqu ibuthene.
Ukucubungula kwenziwa ngedatha encane. Siqoqa futhi Senze inani elincane leDatha Idatha edingekayo nganoma iyiphi inhloso.
Ukucubungula kunqunyelwe isikhathi. Ngeke sigcine idatha yakho yomuntu isikhathi eside kunesidingo.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuchithwa kwedatha.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ubuqotho kanye nemfihlo yedatha.
Amalungelo okufunda kwedatha
Isihloko seDatha sinamalungelo alandelayo:
Ilungelo lokuthola ulwazi - okusho ukuthi kufanele ufanele ukwazi ukuthi idatha yakho yomuntu siqu isetshenziswa yini; yikuphi idatha eqoqwe, kusukela lapho itholakala khona nokuthi kungani futhi kusetshenzwa ngaye.
Ilungelo lokufinyelela - okusho ukuthi unelungelo lokufinyelela idatha eqoqwe kusuka / mayelana nawe. Lokhu kuhlanganisa ilungelo lakho lokucela futhi uthole ikhophi yeDatha Idatha yakho eqoqwe.
Ilungelo lokulungiswa - okusho ukuthi unelungelo lokucela ukulungisa noma ukususa idatha yakho yomuntu siqu engalungile noma engaphelele.
Ilungelo lokusula - okusho ezimweni ezithile ungacela imininingwane yakho yomuntu ukuthi isuswe kumarekhodi ethu.
Ilungelo lokuvimbela ukucubungula - okusho ukuthi kunezimo ezithile ezisebenza, unelungelo lokuvimbela Ukucubungula imininingwane yakho yomuntu siqu.
Ilungelo lokuphikisana nokucubungula - okusho kwamanye amacala unelungelo lokuphikisana nokucubungula imininingwane yakho yomuntu siqu, isibonelo esimweni sokuthengisa okuqondile.
Ilungelo lokuphikisana nokucubungula okuzenzakalelayo - okusho ukuthi unelungelo lokuphikisana nokucubungula okuzenzakalelayo, kubandakanya ukuprofetha; futhi hhayi ngaphansi kwesinqumo esisekelwe kuphela ekucubunguleni okuzenzakalelayo. Leli lungelo ongayisebenzisa uma kunomphumela wephrofayli oveza imiphumela yomthetho ngokuphathelene noma ekuthinta kakhulu.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha - unelungelo lokuthola idatha yakho yomuntu siqu kumfomethi ofundekayo ngomshini noma uma kungenzeka, njengokudluliselwa okuqondile kusuka kuProsesa kuya kwenye.
Ilungelo lokufaka isikhalazo - uma kwenzeka sinqabe isicelo sakho ngaphansi kwamalungelo okufinyelela, sizokunikeza isizathu sokuthi kungani. Uma ungenelisekile ngendlela isicelo sakho esenziwe ngayo sicela uxhumane nathi.
Ngesokudla sosizo igunya lokuphatha - okusho ukuthi unelungelo losizo lwegunya lokuphatha kanye nelungelo lamanye amakhambi asemthethweni afana nokubiza umonakalo.
Ilungelo lokuhoxisa imvume - unelungelo lokuhoxisa noma yikuphi imvume enikeziwe yokuCubungula idatha yakho yomuntu siqu.
Lokhu kungaba ikheli lakho le-e-mail, igama, ikheli lokukhokha, ikheli lasekhaya njll - ngokuyinhloko ulwazi oludingekayo ekukunikezeni umkhiqizo / service noma ukuthuthukisa isipiliyoni sakho samakhasimende nathi. Sigcina ulwazi olusinikeza lona ukuze ubeke amazwana noma wenze eminye imisebenzi kuwebhusayithi. Lolu lwazi lubandakanya, isibonelo, igama lakho nekheli le-e-mail.
Ulwazi oluqoqwe ngokuzenzakalelayo ngawe
Lokhu kuhlanganisa ulwazi olugcinwa ngokuzenzakalelayo ngamakhukhi namanye amathuluzi eseshini. Isibonelo, ulwazi lwenqola yakho yezitolo, ikheli lakho le-IP, umlando wakho wokuthenga (uma ikhona) njll. Lolu lwazi lusetshenziselwa ukuthuthukisa isipiliyoni sakho samakhasimende. Uma usebenzisa amasevisi wethu noma ubuka okuqukethwe kwewebsite yethu, imisebenzi yakho ingangena ngemvume.
Ulwazi oluvela kubalingani bethu
Siqoqa ulwazi kubalingani bethu abathembekile ngokuqinisekisa ukuthi banezizathu zomthetho zokwabelana nathi lwazi. Lokhu kungolwazi olunikeze ngqo nabo noma ukuthi bahlangane ngawe kwezinye izizathu zomthetho. Lolu hlu luyi: I-NCS Trust, i-EFL Trust.
Ulwazi olutholakala esidlangalaleni
Singabutha ulwazi mayelana nawe olutholakala esidlangalaleni.
Sisebenzisa imininingwane yakho yomuntu ukuze:
sinikeza inkonzo yethu kuwe. Lokhu kuhlanganisa, isibonelo, ukubhalisa i-akhawunti yakho; ukukunikeza ngeminye imikhiqizo namasevisi owacelile; ukukunikeza izinto zokukhangisa ngesicelo sakho nokuxhumana nawe ngokuphathelene nalawo mikhiqizo nezinsizakalo; ukuxhumana nokuxhumana nawe; futhi sikukwazise izinguquko kunoma yimaphi amasevisi.
phuthukisa isipiliyoni sakho samakhasimende;
ukufeza isibopho ngaphansi komthetho noma isivumelwano;
ukuxhumana mayelana nohlelo lomusha wena noma ingane yakho ebhalisiwe nayo;
mayelana nezindaba zokuphumelela ezivela ezinhlelweni zethu zentsha;
ukukusekela noma ingane yakho ohlelweni lolusha
Sisebenzisa idatha yakho yomuntu siqu ngezizathu ezisemthethweni kanye / noma nge-Consent yakho.
Ngezizathu zokungena esivumelwaneni noma ukufeza izibopho zesivumelwano, senza imininingwane yakho yomuntu siqu ngezinhloso ezilandelayo:
ukukunikeza isevisi noma ukuthumela / ukukunikeza umkhiqizo;
ukuxhumana noma ngokuthengisa noma ukukhokha;
Ngesithakazelo esizwakalayo, senza imininingwane yakho yomuntu siqu ngezinhloso ezilandelayo:
ukuthumela ukunikezwa komuntu siqu (kusuka kithi kanye / noma abalingani bethu abakhethwe ngokucophelela);
ukuphatha nokuhlaziya isisekelo sethu samakhasimende (ukuthenga ukuziphatha nomlando) ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi, ukuhlukahluka, nokutholakala kwemikhiqizo / amasevisi anikelwe / anikeziwe;
ukuqhuba imibuzo ngokuphathelene nokwaneliseka kwamakhasimende;
Uma nje ungazange usitshele ngenye indlela, sibheka ukunikeza imikhiqizo / amasevisi afanayo noma afanayo nokuziphatha kwakho komlando / ukuphequlula ukuba nesithakazelo sethu esisemthethweni.
Ngemvume yakho Senza idatha yakho yomuntu siqu ngezinhloso ezilandelayo:
ukukuthumela izincwadi zezindaba kanye nemikhankaso (okuvela kithi kanye / noma abalingani bethu abakhethiwe ngokucophelela);
ngezinye izinjongo esikucele imvume yakho;
Senza idatha yakho yomuntu siqu ukuze ufeze isibopho esivela emthethweni kanye / noma usebenzise imininingwane yakho yomuntu ngokukhetha okuhlinzekwe ngumthetho. Sigcina ilungelo lokungaziwa ngeDatha Idatha eqoqwe futhi sisebenzise noma iyiphi idatha enjalo. Sizosebenzisa idatha engaphandle kweNqubomgomo kuphela uma ingaziwa. Asilondolozi ulwazi lokukhokha njengamininingwane yekhadi lesikweletu. Sizokugcina ulwazi oluthe xaxa lokuthenga oluqoqwe ngawe uma nje ludinga izinhloso zokubheka noma ezinye izibopho ezithathwe emthethweni, kodwa hhayi isikhathi eside kuneminyaka ye-5.
Singase sisebenzise idatha yakho yomuntu siqu ngezinhloso ezengeziwe ezingalokothi zibalwe lapha, kodwa ziyahambisana nenhloso yokuqala lapho idatha iqoqwe khona. Ukwenza lokhu, sizoqinisekisa ukuthi:
ukuxhumana phakathi kwezinhloso, umongo kanye nemvelo yeDatha Idatha kufanelekile ukuqhutshelwa ukuCubungula;
ukuqhutshwa okuqhubekayo ngeke kulimaze izithakazelo zakho futhi
bekuyoba nokulondeka okufanelekile kokuCubungula.
Sizokukwazisa nganoma yikuphi ukucubungula kanye nezinhloso.
Ubani omunye ongakwazi ukufinyelela idatha yakho yomuntu siqu
Asihlanganyeli idatha yakho yomuntu siqu nabantu abangabazi. Idatha yomuntu siqu ngawe kwezinye izimo inikezwa ozakwethu abathandekayo ukuze senze ukuhlinzeka ngensizakalo kungenzeka noma ukuthuthukisa isipiliyoni sakho samakhasimende. Sina idatha yakho nge:
Abalingani bethu bokucubungula:
I-Paypal yokukhokha. Ukwaziswa njengoba le nqubo ivela.
Abalingani bethu bohlelo:
I-NCS Trust - yezinhlelo ze-NCS kuphela.
I-EFL Trust - yezinhlelo ze-NCS kuphela.
Sisebenza kuphela nabalingani abacubungulayo abakwazi ukuqinisekisa izinga elifanele lokuvikelwa kwiDatha yakho yomuntu siqu. Sichaza Idatha Yakho Yobuntu Kwabanye Abantu noma Izikhulu Zomphakathi uma sibophezelekile ngokomthetho ukwenza kanjalo. Singase sikwazi ukudalula idatha yakho yangasese kubantu besithathu uma uvumelekile noma uma kunezinye izizathu zomthetho.
Senza konke okusemandleni ethu ukugcina imininingwane yakho yomuntu ephephile. Sisebenzisa izivumelwano eziphephile zokuxhumana nokudlulisa idatha (njenge-HTTPS). Sisebenzisa ukungaziwa futhi sisho igama lapho kufanele khona. Siqapha amasistimu ethu ukuze sikwazi ukuhlaselwa kanye nokuhlaselwa.
Ngisho noma sizama konke okusemandleni ethu asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kolwazi. Noma kunjalo, sithembisa ukwazisa iziphathimandla ezifanele ukuphulwa kwedatha. Sizokwazisa futhi uma kukhona usongo kumalungelo akho noma izintshisekelo. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuvimbela ukwephulwa kokuphepha nokusiza iziphathimandla uma kunoma yikuphi ukuphulwa okwenzekayo.
Uma unayo i-akhawunti nathi, phawula ukuthi kufanele ugcine igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi ibe yimfihlo.
Asihlose ukuqoqa noma ukuqoqa ngolwazi ulwazi oluvela ezinganeni ezingaphansi kwe-14 nge-website yethu. Njengomusa wobusha, kunesidingo sokuqoqa ulwazi olumayelana nabantu abasha abanesithakazelo kulo, noma abaya kuzo izinhlelo zethu. Abazali baxhumana nabo mayelana nale datha uma idatha yomzali inikezwa.
Amakhukhi kanye nezinye ubuchwepheshe esisisebenzisayo
Sisebenzisa amakhukhi kanye / noma ubuchwepheshe obufanayo ukuhlaziya ukuziphatha kwamakhasimende, ukuphatha iwebhusayithi, ukulandelela ukunyakaza kwabasebenzisi, nokuqoqa ulwazi ngabasebenzisi. Lokhu kwenziwa ukuze wenze ngokwezifiso futhi uthuthukise isipiliyoni sakho nathi.
Ikhukhi ifayela elincane lombhalo elondolozwe kwikhompyutha yakho. Amakhukhi esitolo ulwazi olusetshenziswa ukusiza ukwenza amasayithi asebenze. Nguwe kuphela ongakwazi ukufinyelela amakhukhi adalwe iwebhusayithi yethu. Ungakwazi ukulawula amakhukhi akho ezingeni lesiphequluli. Ukukhetha ukukhubaza amakhukhi kungavimbela ukusetshenziswa kwakho kwemisebenzi ethile.
Sisebenzisa amakhukhi ngezinhloso ezilandelayo:
Amakhukhi adingekayo - lawa makhukhi adingekayo ukuba ukwazi ukusebenzisa ezinye izici ezibalulekile kuwebhusayithi yethu, njengokungena ngemvume. Lawa makhukhi awaqoqa noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu.
Amakhukhi okusebenza - lawa makhukhi ahlinzeka ukusebenza okwenza isevisi yethu ibe lula futhi yenza ukuhlinzeka ngezici ezingaphezu komuntu siqu. Isibonelo, bangase bakhumbule igama lakho kanye ne-imeyili kumafomu okuphawula ngakho akudingeki ukuthi ufake kabusha lolu lwazi ngesikhathi esizayo lapho ubeka amazwana.
Amakhukhi we-Analytics - lawa makhukhi asetshenziselwa ukulandelela ukusetshenziswa nokusebenza kwewebhusayithi yethu namasevisi
Amakhukhi wokukhangisa - lawa makhukhi asetshenziselwa ukuletha izikhangisi ezifanele kuwe nakwezintshisekelo zakho. Ngaphezu kwalokho, zisetshenziselwa ukunciphisa inani lezikhathi obona isikhangiso. Ngokuvamile zifakwa kuwebhusayithi ngamanethiwekhi wokukhangisa nemvume yomqhubi webhusayithi. Lawa makhukhi akhumbule ukuthi uvakashele iwebhusayithi futhi lolu lwazi lwabiwe nezinye izinhlangano ezifana nabakhangisi. Ngokuvamile ukukhomba noma ukukhangisa amakhukhi kuzoxhunyaniswa nokusebenza kwesayithi okuhlinzekwe enye inhlangano.
Ungasusa amakhukhi agcinwe kukhompyutha yakho ngezilungiselelo zesiphequluli sakho. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukulawula amanye amakhukhi we-3rd party ngokusebenzisa ispredishithi yokuthuthukisa ubumfihlo njenge optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana namakhukhi, vakashela allaboutcookies.org.
Sisebenzisa i-Google Analytics ukukala ithrafikhi kwiwebhusayithi yethu. I-Google inenqubomgomo yabo yobumfihlo ongayibuyekeza lapha. Uma ungathanda ukuphuma ekulandeleni i-Google Analytics, vakashela Ikhasi lokuphuma lokuphuma kwe-Google Analytics.
Isiphathimandla Esiphezulu seDatha e-England - https://ico.org.uk - I-ICO - I-Office Commision Office
I-Element Society - shayela i-0114 2999 214 ukuze uxoxe ngemininingwane.
Sigcina ilungelo lokushintsha kulo Mgomo Wobumfihlo.
Ukuguqulwa kokugcina kwenziwe i-21 / 05 / 2018.